Iqela lokuhlela elingaqinisekanga | Iindaba zeGajethi
OkwenziweyoGadget.com yenye yewebhusayithi ekubhekiswa kuyo eSpain nge izixhobo, isoftware, ikhompyuter, i-intanethi kunye netekhnoloji ngokubanzi. Ukusukela ngo-2006 besinika ingxelo mihla le malunga nezinto eziphambili ezenzekayo kwicandelo lobuchwepheshe, ngokunjalo Ukuhlalutya ubuninzi bezixhobo ukusukela kweyona khompyuter inamandla ukuya kwezona meko zilula kwii-smartphones, kubandakanya izithethi, iimonitha, ii-smartphones, iipilisi okanye izixhobo zokucoca iirobhothi ukunika imizekelo embalwa. Siyaya nathi ezona zinto zingundoqo zethekhinoloji zehlabathi ezifana ne-WMC e-Barcelona okanye i-IFA eBerlin apho sihambisa khona iqela lethu labahleli ukuze sikwazi ukwenza ukulandelwa komsitho kwaye unike abafundi bethu lonke ulwazi kumntu wokuqala kunye nexesha elifutshane kunokwenzeka.
Ngapha koko, kwi icandelo lethu lokufundisa unokufikelela kuzo zonke iintlobo zolwazi olusebenzayo nge iincwadana zemanyathelo ngamanyathelo ezibanzi ezibandakanya iifoto kunye / okanye iividiyo zoncedo kwaye zigubungela izihloko ezahlukileyo kangangokuba zisuka kuzo ufomatha njani ithebhulethi ye-Android a indlela yokukhuphela ifoto kwi-facebook ukunika imizekelo.
Ukuba ufuna ukubona ezinye izihloko esijongana nazo kwiwebhu kufuneka nje fikelela kwiphepha lamacandelo Apho ungababona bonke behlelwe ngumxholo.
Ukulungiselela wonke lo mxholo womgangatho nangeyona ndlela ingqongqo, I-Gadget ye-Actualidad ineqela labahleli abaziingcali kwitekhnoloji entsha kwaye iminyaka emininzi yamava ekubhaleni umxholo wedijithali. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela lethu labahleli Kufuneka nje ugcwalise le fomu Kwaye siya kunxibelelana nawe ngokukhawuleza.
Umhleli kunye nohlalutyo lwe geek. Umthandi wezixhobo kunye netekhnoloji entsha. Ndinomdla wokwazi kunye nokuvavanya zonke iintlobo zezixhobo, ii-smartphones, iikhompyuter, iitafile, iilaptops, phakathi kwabanye, kwaye ndonwabile ukwabelana ngolwazi lwam nehlabathi ngamazwi.
Ukusukela kwii-90s zokuqala, bendinomdla ngayo yonke into enxulumene netekhnoloji kunye nekhompyuter. Ngesi sizathu, ukuvavanya nayiphi na igajethi ekhutshwa ziimpawu ezinkulu nezincinci, ukuyihlalutya ukuze ufumane okuninzi kuyo, yenye yezona zinto ndizithandayo.
Ndiyayithanda yonke into enxulumene netekhnoloji kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo. Kudala ndihlalutya zonke iintlobo zezixhobo ze-elektroniki ukusukela kwiminyaka yoo-2000 kwaye ndihlala ndizazi iimodeli ezintsha eziza kuphuma. Ndide ndithathe ezinye xa ndiqhuba ezinye izinto endizithandayo, ukufota kunye nemidlalo ngokubanzi. Ngekhe bafana ngaphandle kwabo!
UPaco L Gutierrez
Umthandi weetekhnoloji ezintsha, kodwa ngakumbi izixhobo. Ndiyazi kakuhle izixhobo ezininzi ezikhutshwa minyaka le ukuze ndikwazi ukufumana izixhobo ezinomdla kum. Nje ukuba ndifeze, ndibahlalutya nzulu ukuze ndizazi izibonelelo abanazo.
URafa Rodríguez Ballesteros
Soloko ubambekile kwizixhobo kunye nakwizinto zetekhnoloji. Ndivavanya, ndihlalutya kwaye ndibhale malunga nee-smartphones nazo zonke iintlobo zezixhobo, izixhobo kunye nezixhobo zetekhnoloji ngalo mzuzu. Ukuzama ukuhlala "uvuliwe", funda kwaye ugcine unolwazi ngazo zonke iindaba.
Ndiyayithanda itekhnoloji, ayisiyiyo yonke into eyi-Apple ... Ndicinga ukuba iinkampani ezininzi nangakumbi ziphuhlisa izinto ezinomdla kwaye silapha ukuvavanya iindaba zeteknoloji zamva nje. Ndizama ukufumana zonke izixhobo ezinokubakho nezingena endlwini yam ...
Ndiyithanda kakhulu itekhnoloji, ndiyakonwabela okomntwana onezixhobo. Ndiyathanda ukuthelekisa iimodeli ezahlukeneyo, ukufumanisa amanqaku amatsha, kunye nokwazi ezintsha ezizayo. Izixhobo ezinokubenza ubomi bethu bube lula kakhulu, yiyo loo nto ndithanda ukwabelana ngento endiyaziyo ngazo.
Ndiyinjineli ndithandana netekhnoloji entsha nayo yonke into ejikeleze uthungelwano lwenethiwekhi. Ezinye zezixhobo zam endizithandayo zihamba nam yonke imihla, ezinje ngee-smartphones okanye iipilisi, izixhobo ezinceda ukuphucula ulwazi lwam kunye namava kwizixhobo.
Ingcali yekhompyuter nangona ethanda umhlaba wetekhnoloji ngokubanzi kunye neerobhothi ngokukodwa, inkanuko ekhokelela ekubeni ndiphande kwaye ndiphande lonke uthungelwano ndikhangele naluphi na uhlobo lwento entsha malunga nezixhobo, nokuba zezokufunda okanye zeprojekthi.
Itekhnoloji entsha yeyona nto ndiyithandayo. Ndiyaqhubeka nokonwabela njengosuku lokuqala ndithetha ngayo nayiphi na igajethi ebetha intengiso: amanqaku, amaqhinga, ... ngamafutshane, yonke into malunga nayo nayiphi na igajethi ye-elektroniki.
Ndinomdla kakhulu kwitekhnoloji, ngakumbi iifowuni eziphathwayo. Ndiyakonwabela ukwazi iindaba malunga nezixhobo, kunye nokuzivavanya ukuze ndifumanise, ngenxa yoko, ukuba bahambisa oko bakuthembisayo okanye ukuba zizinto ezingabangeli mdla mihla le.
UGadgetmaniaco, okonwabelayo ukuvavanya izixhobo ezinokusetyenziselwa ukuzibonakalisa kulo naluphi na uhlobo lobugcisa. Ukongeza, ndiyakuthanda ukuvavanya nayiphi na igajethi eza kum, ke ndinamava amaninzi ngetekhnoloji entsha kwaye ndiyakonwabela ukusombulula nakuphi na ukuthandabuza okungavela ngexesha lokusetyenziswa kunye nokuphathwa kwalo.
Isazinzulu sekhompyuter esoloko sikonwabela ukuphanda izixhobo ezintsha eziza kwintengiso. Ukuba kukho enye into endiyithandayo ukuchitha ixesha lam lasimahla kunye nayo, iphonononga ngokupheleleyo zonke izixhobo ze-elektroniki ezizayo.
Ndiyayithanda yonke into enxulumene netekhnoloji kunye nezixhobo. Ndihlala ndifuna ukufunda onke amaqhinga aneentlobo ezahlukeneyo zegajethi, eziluncedo ekuzonwabiseni nasekusebenzeni.
Uthando oluncinci ngobuchwephesha kunye neemoto zehlabathi. Ukwazi izixhobo ezinzulu, ukubona indlela ezisebenza ngayo okanye indlela eziphucule ngayo yinto endizithandayo ngayo.
Ndingumfana othanda itekhnoloji. Ndiyathanda ukufunda okoko kuxhomekeke kuloo nto, ngakumbi izixhobo. Nabani na onomdla kum, kodwa iidrones, i-automation kunye / okanye i-automation yasekhaya kunye nobukrelekrele bokufakelwa bubuthathaka bam.
Iigajethi zihlala zindonwabisa, kodwa ukufika kwee-smartphones kuye kwandise umdla wam kuyo yonke into eyenzekayo kwihlabathi lobuchwephesha. Ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba akukho gadget ibhetele kwaye iluncedo kunoko.
UCristina Torres obambe umfanekiso
Ukuthanda i-intanethi kunye netekhnoloji entsha, bendihlala ndikuthanda ukuzama zonke izixhobo eziwe ezandleni zam, ukufumanisa zonke izinto ebebenazo, nokuzithelekisa neenguqu zabo zangaphambili ukubona ukuba ziphucuke ngokwenene. Ndiyathanda ukwazi zonke iindaba ngezixhobo endizifumanayo, ulwazi endiya kuthanda ukwabelana ngalo nawe.